China Yakasarudzika Buckle Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Imba > Bhatani > Bhatani resimbi > Buckle
1. Nhanganyaya yeBuckle:
2. Chigadzirwa parameter yeBuckle:
Belt Buckle Vagadziri Wholesale Yakachipa TsikaFashoni Varume Simbi Belt Buckle YeBelt
nickle yemahara kana yakagadzirirwa
nguvo / bhegi / shangu / mabhandi
mhando yepamusoro, fekitori yakanangana nemutengo wakanaka
zvinowanika kana mari inotyisa yakapihwa
3-7days neDHL / UPS / Fedex / TNT
100pcs, kuraira kwakawanda kwete pasi pe500RMB yechinhu chimwe nechimwe
1-2 mavhiki nemhepo, negungwa kana combiantiontransportation
MAZANO: 1.Vatengi 'saizi, mavara, masitayera zvinogamuchirwa, nezvimwe. 3.Mix odhi inogamuchirwa.
Zvinotarisirwa nevatengi nezve:
Bhandi bhandi rinogona kukamurwa kuita zuva bhandi bhandi bhurugwa, zai bhandi bhandi bhureki, hafu kutenderera bhandi bhureki, D mhando bhandi bhureki, mativi erudzi bhandi bhureki, rakatenderera mhando bhandi bhureki, elliptical mhando bhandi bhureki, ziso mhando bhandi bhurezi.
3.Product Mirayiridzo yeBuckle:
4.Kupaka uye kutakura
Belt buckle ine akasiyana mafomu ekushandisa, anosanganisira zvipfeko, mabhegi, mabhandi, mabhandi, ribhoni uye mamwe minda, inoita basa rekudzora nekusunga, pamwe neshanduko yeThe Times, asi zvakare yakachinja kuita chimwe chemafashoni zvinhu zvekupfeka.
Q1: Uri fekitori kana kambani yekutengesa?
A: Hongu, isu tiri fekitori, iri muDongguan, GuangdongProvince yeChina.
Q2: Unogona kubvuma yakagadzirirwa yangu yega logo zvigadzirwa?
A: Ehe, pls tumira ako epakutanga masampuli kana sketches, ipapo wecan enda musoro kuti utarise zvimwe ruzivo info pamwe nemutengo wakanakisa, kutumirwa, dhizaini zvichidaro.
Q3: Ndingawana sei masampuli?
A: Tinogona kupa emahara zviripo zvigadzirwa sampuro yekutarisa iwe. Kazhinji kuburikidza nekutaura, senge DHL, Fedex, UPS, TNT nezvimwewo, freightcollected.
Q4: Yakawanda sei yauchazobhadharisa nyowani yakagadziriswa developmentitem?
A: Kune chinhu cheOEM / chakasarudzika, mafomu matsva anodikanwa kugadzira.
Kazhinji USD60 yedhizaini, ye buckle inoenderana nedesign uye saizi. Asi chakuvhuvhu mutengo unogona kudzorerwa kamwe zvachose maodha qty anogona kusangana
Q5: Unogona here kupa yemahara sampuli?
A: Ehe, isu tinogona kupa emahara sampuli. Pre-kugadzirwa sampuliyowo inowanika kana zvichidikanwa (kutakura zvinhu kunounganidzwa) kwauri unobvumidza & kuyedza. Iwo maodhiziro anotanga kana uchinge wawana iwe kusimbiswa.
Q6: Inguva yakareba sei inoda kugadzirwa?
A: Kazhinji 7-10 mazuva echidiki odhiraini / chinhu cheOEM, uye mazuva gumi nemaviri nemakumi maviri neshanu ekugadzirwa kwakawanda zvinoenderana neyako qty.
Q7: Ndeipi nzira yekutumira?
A: Kune diki odha, kuendesa kune epasirese expression, akadai DHL, UPS, DHL, Fedex nezvimwe.
Zvekurongeka kukuru, kuendeswa nechikepe kana nemhepo. Kana zvakare inogona kupatsanurwa nechikumbiro chako.
Q8: Ndeipi nguva yako yekutungamira?
A: Kune yakasarudzika chinhu, yedu inotungamira nguva ndeye 12-15 mazuva.Urgent chinhu, isu zvakare tinogona Push & kuendesa iyo ASAP